Shiinaha 50 qaybood Alcohol / Hyamine Wipe factory and saarayaasha | Zhongrong
Nadiifiyaha Gacanta TECH-BIO
Carruurtu Waxay Isticmaalaan Nadiifiyaha Gacanta ee TECH-BIO
Nadiifiyaha Gacanta 50ml TECH-BIO
Nadiifiyaha Gacanta Qoyaanka 500ml TECH-BIO
Nadiifiyaha Gacanta ee OEM
75% Khamriga Jeermiska Khamriga TECH-BIO
50ml 75% Qamriga Jeermiska Alkolada TECH-BIO
500ml 75% Khamriga Jeermiska KHATARTA-BIO
2.5L 75% Daawada jeermiska Aalkolada TECH-BIO
75% Kahortaga Aalkolada ee IBC / Drum
Masaxaadda jeermiska jeermiska 'TECH-BIO'
1 gabal Alkohol / Hyamine masax
10 xabbo Alkolo / Hyamine masax
50 xabbo Alcohol / Hyamine Wipe
150 xabbo Alcohol / Hyamine Wipe
50ml Gacmo Nadiifiyaha Jel TECH-BIO
500ml Mashiinka Nadiifiyaha Gacanta GEL TECH-BIO
Waxqabadka bakteeriyada ee sheygan waxaa lagu tijaabiyaa iyadoo loo eegayo heerka qaranka hay'adda baaritaanka u qalmidda ee khuseysa. Qiyaasta nadiifinta ee wax soo saarkan ee ka soo horjeeda Escherichia coli, Staphylococcus aureus iyo Candida albicans waxay gaari karaan 99.99% iyadoo la raacayo xaaladaha tijaabada hal daqiiqo. Natiijooyinka waa tixraac.
50 Piece Xirmo ee 75% Akhamriga Wipe
Soo-jeedinta bacda baakadaha lagu talinayo ended
Length * width * height 220 * 105 * 40 mm
Nuqul ka kooban ：
Astaanta magaca TECH-BIO 、 magaca Shiinaha & Ingiriiska
Waxay ku nadiifin kartaa maqaarka si tartiib ah jilicsan jilicsan. Waxay ku habboon tahay tirtirka gacmaha, maqaarka, iwm, ilaalinta caafimaadka qoyska waqti kasta oo meelo kala duwan ah.
Magaca badeecadaPe 75% Masaxida Aalkolada
Waxyaabaha ugu muhiimsan： 75% Alkolo （V / V） Biyo saafi ah 、 Spunlace nonwoven
Isticmaal baaxad： Waxay ku habboon tahay tirtiridda gacmaha, wejiga, maqaarka aan is-taaban iyo guud ahaan walxaha. Iska ilaali inaad u isticmaasho indhaha, boogaha iyo qaybaha kale ee xasaasiga ah.
Isticmaalka: Ka jeex dhejiska. U isticmaal soo saarida ka dib kuna xir waqtiga. Waqtiga ficilku yahay gacmaha waa min 1min, waqtiga talaabada maqaarka dhaw uusan gaarin waa min5min, waqtiga talaabada walxaha caadiga ahna waa min30min.
DigniinKu keydi meel qabow oo qalalan. Adeegsiga dibedda, iska ilaali afka iyo taabashada indhaha. Guban kara, ka fogow heerkulka sare ama isha dabka. Dadka xasaasiyadda ku leh aalkolada waxay u isticmaalaan si taxaddar leh. Ka fogee meel aysan gaarin dhallaanka iyo carruurta yaryar. Fadlan ku rid qashinka qashinka kadib isticmaalka. Musqusha ha ku daadin si aad uga fogaato xannibaadda. Dhallaanka kayar 3 sano waa in aan la isticmaalin.
Heerka caafimaadkaGB 15979
Heerka fulinta ：GB / T 27728-2011
Caddaymaha Product ：200mm X 150mm
Waxyaabaha saafiga ah: 50 kumbiyuutarada
Nolosha shelf: Laba sano
Lambarka dufcadda wax soo saarka: Eeg baakadaha
Dhamaad taariikhda: Eeg baakadaha
Idman waxaa qoray Zhongrong Technology Co.fuuqbax Ltd.
Ku dar: Lambar 1, Wadada Changqian, Degmada Fengrun, Magaalada Tangshan, Gobolka Hebei
Soo-saare: Jinhua Changgong Products Nadiifinta Co., Ltd.
Kudar ：Aagga Waxqabadka Ditian, Magaalada Xiaoshun, Degmada Jindong, Magaalada Jinhua, Gobolka Zhejiang
Shatiga Nadaafadda No: (Zhejiang) Shahaadada fayadhowrka (2018) Lambarka 0071
Baakadaha iyo gaadiidka
Hore: 1 gabal Alkohol / Hyamine masax
Xiga: 10 xabbo Alkolo / Hyamine masax
Cinwaanka: Room1602 Vanke Center, No.970 Nanning Rd., Degmada Xuhui, Shanghai 200235 Office SH Office）
Telefoon: +86 21 6470 0198